မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဒီဟာလေးကတော့ ၁၈နှစ်အထက်မှ ကြည့်သင့်ပါတယ်(ဗဟုသုတ ယူထား)
မကြည့်ဖူးသေးသူ များမယ်ထင်ပါတယ် မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးပဲဆိုဆို
သိထားကြည့်ထားသင့်တယ်ထင်လို့ ။ တချို့ ဆို သေတာသေသွားတာ အခုလိုကြည့်
ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘတွေဟာ အသက်နဲ့ ရင်းပြီး ကျနော်တို့ ကို မွေး
ခဲ့ကြတာနော် Youtube privacy နဲ့ ငြိမလားမသိ။ တင်တော့တင်ကြည့်တယ် မရလို့ 
ပျက်သွားရင်တော့မူရင်းလင့်ကနေ သွားပြီး ဒေါင်းလုပ်ယူလိုက်။
မူရင်း - https://www.youtube.com/watch?v=LvMtlsf4-6s
Author Anonymous at 5:54:00 PM
အဲဒါကြည့်ဖူးတယ်..အစ်ကို. လူတောင်ဖျားချင်သွားတယ်.။ အမေ့ကိုလည်း သတိရတယ်.။ ကိုယ့်ဖာသာတောင် ကလေးယူဖို့တော်တော်စဉ်းစားသွားရတယ်.။
18 နှစ်မပြည့်သေးလို့မကြည့်ခဲ့ဘူး သားမက်လေးရေ
အင်..မောင်တစ်ယောက်တော့ လုပ်ပီ. ကြည့်စေချင်တယ်လည်းပြောတယ် ၁၈ နှစ်မပြည့်ရင် မကြည့်နဲ့တဲ့။ အဲလိုရေးထားမှ လူတွေကပိုကြည့်ချင်ကြတာ ခက်ကွာ။ ဘာမှမရေးထားဘဲ တင်ထားရင်တောင် လူတွေအဲလောက် စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်။ တင်ထားတာကလည်း ဖွေးဖွေး ဓါတ်ပုံနဲ့ဆိုတော့။
တိန် ဖွေးဖွေးတော့ ဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဗီဒီယိုပြန်ပြင်ထားတာပါ မကြီးလွမ်းရာ..ဒို့ယောက်ခမကလည်း ၁၈ နှစ်မပြည့်တော့ ဘီလိုလုပ် ပါးပါးနဲ့ ရလည်းမသိဘူး..တိန် ဦးလေးမသုံးလုံးက ကလေးယူတော့မယ်ဆိုပဲ..တေဘီဆရာ..ကြည့်ပြီယူချင်စိတ်ပေါက်တွားဘီလား
ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်ကို သူ့တပည့်ချီးမွှမ်းသလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ဘာမှမပြောတော့ဘူးနော်။
အင်း ကြည့်ခဲ့တယ် ဆရာမောင်ရေ ၁၈ နှစ်ပြည့်လို့ ကြည့်ခဲ့တယ်နော်
မကြည့်ဘဲ မနေခဲ့့ဘူးဗျို့ ...:D ။
အဲဒီအူအရှည်ကြီးကို မခင်ရဲ့ဗိုက်ထဲကို ဘယ်လိုပြန်ထည့်လဲဟင်..
chartake mglay said...
မဖြစ်လောက်ဘူးထင်းတယ်နော်ဗဟုညုတရတာပေါ့ဟီဟီအိမ်းကအစ်မကိုပြလိုက်ချင်တယ် ယောက်ကျားယူဖို့ဘဲစိတ်ကုနေတဲကောင်းမမြန်မြန်ပေးပစ်မယ် စိတ်ဝင်းစားရင်သိန်၂00နော်လာခဲ့
မိန်းကလေးကို အထင်ကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ ငါတို့ကိုလူ့လောကထဲရောက်အောင် မွေးနိုင်တဲ့သတ္တိ ရှိလို့ပါပဲ
ကလေး ၁၁ ယောက်ပဲ စိတ်ဝင်စား၇င်ဟဲ
မြန်စွာဘုရားတောင် မိန်းမကမွေးမှဖြစ်ရတာပဲ ကိုယ်တွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး မိခင်ကနေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုတော့ မမေ့ကြဖို့လိုအပ်တယ် ..............
နည်းနည်းေုကာက်ဖို.ကောင်းတယ်နော်။ အခုမှပဲကိုယ့်အမေကို ပိုလေးစားရ
ကောင်းမှန်းသိတော့တယ်။ မာမားရေ! ဒီလောကကိုရောက်အောင် မွေးထုတ်
ပေးခဲ့တဲ့အတွက် သားအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်။ အဲ့စကားနဲ.တောင် လုံ
လောက်မယ်လို.မထင်ပါဘူး။ အမေတွေက အသက်နဲ.ရင်းပြီးမွေးထုတ်ပေးခဲ့
ရလို.ပဲ . . .
ဗဟုသုတအနေနဲ့တင်မက မိခင် တိုင်းကိုသနားမိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်ကိုဒီ့ထက်မကတွေ့ရှိခဲ့ရင်လည်းမျှဝေပါ ခင်ဗျာ။ ကဗျာ တစ်ခုပါ
Good !! Excellent movies for this site :P :P :P
ယောကျာင်္းတွေကပိုပြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးရှိနေတဲ့သူတွေ...တို့ အမေတွေသာတို့ တွေကိုဒီလိုမမွေးခဲ့ရင်လောကကိုရောက်လာနိုင်စရာမရှိပါဘူး ......မွေးကျေးဇူးလေးပဲရှိသေးတာနော်။
သားသားလည်းကြည့်လိုက်တယ် 18နှစ်ပြည့်ဖို့ နှစ်ရက်လို
ayee kyi said...
အလည်လာသွားတယ်နော် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ တချို့ သေတာသွားတာ မမြင်ဖူးလိုက်ဖူး ဆိုတာ ယုံတယ် အဲလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ connection မကောင်းတဲ့ကြားက သေချာကို စောင့်ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ် ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
sayar taw said...
အူ အရှည်ကြီးလို့ပြောပြော အဲဒါအချင်းနဲ့တွဲနေတဲ့
အူမကြီးပါ၊ ခလေးမွေးပြီးရုံနဲ့မပြီးပါဘူး ခလေးနောက်မှာအချင်း
အဲဒိ အူအရှည်ကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အချင်းထုပ်ကြီးထွက်ကျ
မေးစရာဖြစ်သွားတာပေါ့..၊ အဲဒိ အူအရှည်ကြီးကိုကတ်ကျေးနဲ့ပတ်ပြီး
အချင်းထုပ်ကြီးကိုဆွဲထုတ်နေတဲ့အထိ ဗီဒီယို ရိုက်ထားတာပါ၊ ထိုင်းလား၊မလေးလား မသိဘူး၊တင်ပြတာကောင်းပါတယ်၊အများအားဖြင့်
မြန်မာပြည်က မိန်းခလေးတွေရောယောင်္ကျားလေး၊ကြီးတွေရော၊ သေသာသွားတယ်
ဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့..၊အရေးပေါ်ဖြစ်လာရင် လက်သည်ကနီးမှ
မြန်မာလူမျိုးတွေက ရိုးရာဓလေ့လို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ရင်အနားတောင်မသီ
ကြတော့ ခလေးမွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတဆိုတာ ဘာမှန်းကိုမသိ
ကြတော့ဘူးပေါ့၊ ကျားကျား၊မမ တတ်ထားသင့်ပါတယ်...။ကျေးဇူးပါခုလိုတင်ပြပေးတဲ့အတွက်၊
Moon Shine said...
မရိုင်းဘူး ဒါဟါအမှန်တရားပဲ အားပေးတယ်
ကျွတ်ဆင်ကြီးပါလားကွယ် ။ဒီနှစ်ထဲ မှာ ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်မှာလေ..နောက်လဆိုပြည့်တာ့မှာ အဲဒါမို့ ကြည့်သွားတယ်နော်.. (ဒုတိယ တစ်ခေါက်ဆိုပါတော့..:P)
ငါ့ကို ချစ်တဲ့သူ said...
ကောင်းပါတယ် လူတစ်ယောက်ဖြင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေ လူအများ မိဘရဲ့စေတနာတွေကိုနားလည်သွားမှာပါ ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ထိအသက်နဲ့ရင်ပြီးမွေးခဲ့လဲဆိုတာသိမြင်နိုင်ပြီး မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုဆပ်နိုင်ကြပါစေ..............
Thatnaing Phyo said...
ကျနော်ကိုလည်းပေးကြည်.ဗျာ လိုင်းမကောင်းလို.အကိုဆီကပဲတောင်းတော.မယ် thatnaingphyo879
ဒုတိယအကြိမ်ကြည့်သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းကလေးမွေးမယ်ဆိုလို့ယူကျူမှာရှာပြီးကြည့်ဖူးတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ သူကဗိုက်ခွဲပြီးဘဲ မွေးဖြစ်သွားတယ်။
Zayar Min said...
Rambo Thang said...
သားသားကိုလဲပို့ ပေးပါနော်အစ်ကိုကြီး larb.lb89@gmail.com
htin aung said...
PLS SENT (,I CANNOT DOWNLOAD ) TO hotelalpha11@gmail.com
ကျွန်တော့်ကိုလည်း ချန်မထားပါနဲ့ ပို့ပေးပါနော်. thargyi275.gmail.com
Web Bank said...
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓက ပဋိသန္ဓေနေရတာကို ဒုက္ခလို့ဟောထားတာကိုးးးး
mr.ghostphone@gmail.com ကို ပို့ပေးပါနော် ဒေါင်းမရလို့ပါ
သီသင်တဲ့ အရာတွေပဲ ဒါရိုင်းတာမဟုပ်ပါဘူး
Lu Lu Sein said...
Kg Kin said...
chan nyein said...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ နေရတုန်းခဏမှာ ကောင်းကောင်းနေနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်
ခုလိုကြည့်ရတဲ့အတွက် ဗဟုသုတအများကြီးရတဲ့အပြင် ကျေးဇူးလဲအများကြီး တင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်တို့ လူလတ်ပိုင်းအအရွယ်တော်တော်များများ သင်ခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ခံစားမိပါတယ်။။။ ပညာစုံ ကြင်ယာရှာနေခိုက်ကာလ သားသမီးတို့မိဘပြောစကားနားမထောင်တဲ့အခါ ကြုံခဲ့ပါတယ်... မိမိ ကိုယ် မိခင် ဘယ်လို မွေးခဲ့သည်ကိုပင် အမှန်ပင်မသိခြင်းပါ...သိပါသည်စာထဲမှာ ဆိုသလိုပါပဲ...အိမ်ထောင်ကျပြီး ဇနီး ကိုယ်ဝန်ရှိလာမှ မိမိ မိခင် မိမိကိုယ်ဘယ်လိုပြုစု ပျိုးထောင်ခဲ့သည်ကို သံဝေဂ ရလို့မဆုံး..မိမိ မိခင် ကို အတိုက်အခံ ပြောခဲ့သည်ကိုပင် မိမိကိုယ်မိမိ မည်သို့အပြစ်ပေးရမည်ကိုပင် နေ့စဉ် ပင်အတွေးထဲမှာ ရှိနေတယ်...သူငယ်ချင်း အပေါင်းတို့ရေ...........
nay lu said...
အကိုရေ ညီ့ဘက်က ကြည့်လို့မရဘူး ဗျ
ဖြစ်နိုင်ရင် မေလ်ထပြို့ပေးပါ့လားဗျ ကျေးဇူးပါနော် အကို
မေလ်းက nmonelay@gmail.com ပါ အကို
Phoe Thar said...
Pyaetoe mg said...
ကျေးဇူပါတင်ပါတယ်ဗျာ. ကျန်တော်တို့တွေအတွက် ဗပာုသုတရပါတယ်ဗျာ
အော် အကိုတို့ ကလဲဗျာ အထူးအဆန်းမှတ်လို့တကယ်လည်းထူးဆန်းပါတယ် ဒိထက်ကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းရချင်ရင် OG နဲ့ ပေါင်းထားလေ အကိုတို့ ကလဲ
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောဖူးတယ် ငယ်ငယ်တုံးကတဲ့ အသက် ၁၄ - ၁၆ နှစ်အရွယ် ကိုရင်ဘဝ လူဝတ်လဲတဲ့ည ကလေးမွေးတာမြင်ပြီး နောက်ရက်ချက်ချင်းပြန်ဝတ်တာ သက်တော်ကြီးရင့် ပျံလွန်တော်မှုတဲ့အထိပဲ တော်တော်လန့် ဖျား သံဝေဂ ရသွားတာကိုကြားဖူးလို့ကျနော်လဲသိချင်မြင်ချင်တာကြာနေပြီ ခုထိတော့အပြင်မှာမမြင်ဖူးသေးဘူး
Khin Maung Kyaw said...
kk thu said...
kkthu09@gmail.com နော် ပို့ါပေးပါ
hla tun said...
ko soe kyi said...
kosoekyi.1980@gmail.comကိုလည်ူ ပို့ ပေးပါ အုံး အကို
ကြည့်မရလို့ saimaosyn@gmail.com နဲ့ပို့ပေးနော်.ကျေးဇူး..
tarzan lay said...
tarzan08.tps@gmail.com ကိုလည်း ပို့ပေးပါဦးဗျာ.... ခင်မင်လေးစားလျက်.......
Su Hlaing Aye said...
Pls send me,suhlaingaye3@gmail.com
lin ler said...
ကျွန်တော့ကိုလဲပို့ပေးပါအုံးဗျာ ကြည့်ချင်လို့ပါ mgheinhtetzaw455@gmail.com
yelin naing said...
Sai baby milo said...
ကျွန်တော့ကိုလဲပို့ပေးပါဗျ sai.babymilo9@gmail.com thanks
ei phyo san said...
ကြည့်လို့ကိုမရပါလားနော် naungyoelay1993@gmail.com ကိုပို့ပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
snowking557@gmail.com ko sent pay par bro. plz.
bro please send yehtutwin1998@gmail.com
ကြောက်စရာကြီးး...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မသိတာတွေကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက်ပါ..
Drowkargyi King said...
myo myanmar said...
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် mmyanmar977@gmail.com ကိုပို့ပေးပါလား
ol en said...
ပို့ပေးပါအုံး လိုင်းမကောင်းဘူး oleander.flower.of@gmail.comပါ
แก่น คำแต้ said...
အကိုရေ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ kakham2720@gmail.com ကိုလဲပို့ပေးပါဦးဗျာ။
Roy Jack said...
ples sent to me my mail jackblack704@gmail.com
plz sent to me my mail rraincode@gmail.com i will be looking forward to it :)
Moe Nyein said...
မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးပါလား whitegirl34@gmail.com
Aike Swe said...
Brother, Please.. send me this mail... aikeswe@gmail.com
saung zaw said...
မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးပါလား saung1975@gmail.com
tin thein said...
၁၈နစ်ပြည့်ကြည့် နှစ်ခုလုံး ဒေါင်းလို့မရလို့  ဒီမေးကိုပို့ပေးပါ ကျေးဇူးပါ။
soe htet kyaw said...
ဟဲဟဲကျွန်တော့ကိုလဲပို့ ပေးပါနော်...ကျွန်တော်လည်း၁၈နှစ်ပြည့်ပြီလေနောက်ထပ်၂နှစ်ကြာရင်ပေါ့ဟဲဟဲ...iloveyou1500nn@gmail.com...Bye bye...
sakura Lover said...
please send me.thank
lu soe said...
ကြည်လို့ ရဝူး မေးထဲကို ပို့ ပေးစေချင်ပါတယ် lusoecupid@gmail.com ပါ
ကွန်ပျူတာကို Andriod version ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ် ရှိရင်
Phyowaikyaw95@gmail.com ကိုပို့ပေးပါ ခင်ဗျာ……………………………
သူများတွေလိုတော့ရေးခြင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် VO က ကောင်းလားမကောင်းလားဘာမှန်းတောင်မသိတော့ မရေးတော့ဘူး
Yethu Yaphyoe said...
zaw357@gmail.com ကို ပို့ပေးပါဦး ညီရေ။
zin ko said...
ကြည့်ချင်တယ်ဗျာ..ဘာလဲလို့ ပို့ပေးပါဦး zinkolwin90@gmail.com
Bo Tayza said...
please for me too..nangthida.20@gmail.com
arrc maung said...
aungnaing thumn said...
ူpls let me see!
aung thetpaing said...
please send to my mail... aungthetpainghtay@gmail.com
kaykhine soe said...
please send me kaykhinesoe25@gmail.com
minkutha mandalay said...
sketchup စာအုပ် ရချင်လို့ပါ...
Than thar Han said...
please send me romeox10i@gmail.com
Chan Pyae Ko Ko Zin said...
i wanna to watch this video. please, you can send to me. chanpye1510@gmail.com
ကြည်.မရဘူးဗျ cchanmyae25@gmail.com ကို mail ပို.ပေးပါအုံး
Lusoe Koko said...
lin aung said...
sky lay said...
ကျတော်ကိုလည်း ပိုပေးနော် skylovestar1629@gmail.com
ကြည့်လို့မရဘူးဗျ အစ်ကို.... ကျွှန်တော့်ဆီကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး ပို့ပေးပါဦး....
plz ! bro naylinmm.mm@gmail.com လည်းပို့ပေး ပါဦး
facebook acc လုပ်နေတာ၂လရှိတော့မယ်လုပ်လို့မရသေးဘူးကြာရင်
passwordကိုthihaaung596@gmailကိုပို့ပေးပါ။facebookလုပ် ရင်းnetဖိုး၈၀၀၀ကျော်နေပြီမရသေးလို့ကူညီပါအုံးခင် ဗျာ။please....;'(
Shwe Pu said...
kothetsb@gmail.com ကိုပို့ပေးပါအုံးနော် ဒေါင်းမရလို့
twistaboyz ......pop pay par ohm ... naw ako
kokyawsoelin87@gmail.com ကိုပိုပေးပါအုံး ဒေါင်းမရလို
foxki nn said...
Mo Too said...
watch loe ma ya bu bya
my mail is motoo1312@gmail.com
video file dwe watch loe ma ya bu taw taw myar myar bl
Software language said...
Min Nay Kha said...
ကြည့်လို့မရဘူး မေးလ်ကို ပို့ပေးပါ mnkha35@gmail.com
ကြည့်လို့ပရပါဘူး မေးလ်ထဲကို ပို့ပေးပါ။
Ye Gyi said...
ဖွင့်ကြည့်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ် emailနဲ့ ပို့လို့ရတယ်ဆို လိုချင်ပါတယ် yegyi82@googlemail.com ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Hlwam Moe said...
koko mg said...
ကြည့် လို့ မရဘူး....ကွာ
ဒီမှာ ဒေါင်းမရ ကြည့်မရလို့ပါ ..
Baby Milonz said...
Net Boy Myanmar said...
"this video is private"တဲ့ ကြည့်လို့မရဘူး... ပို့ပေးပါဦး netboy.mm@gmail.com
Salai Thant Zaw Win said...
Thee Su Thein said...
Wai Wai Min said...
Mike Christal said...
ကြည်.လို.ရဘူး ပို.ပေးပါဦး mr.mikechristal@gmail.com
Thura Aung said...
ah ko yae kyi lo ma ya bu mail lay send pay lo ya ma lar thura.aung14641@gmail.com ko
ko htut gyi said...
အကိုရေ မရတော့ဘူး လင့်သေနေပြီထင်တယ်
Admin - ဖြိုးဝဿန် said...
Miss Light Light said...
want to watch pls send to my mail please
Khaing Zar Thwe said...
Min Din said...
အကိုရေ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ mindin04@gmail.com ကိုလဲပို့ပေးပါဦးဗျာ။.
hlamyo zaw said...
my mail adress.
please send to kaungkaung.m@gmail.com
Tun Yan Naing said...
please send to ynt501tun@gmail.com
please send to dragonnightmare.aung@gmail.com
Please send to (soethu.sys@gmail.com)
Tinn Tunn said...
Please send to me tinntunn@gmail.com
Tun Myint said...
PLEASE KINDLY SEND TO tunmyi@gmail.com
please send to popeesotay@gmail.com
Please send to naingnainganh264@gmail.com
kyawmyo thu said...
please send to kyawmyothu.4148@gmail.com
si thusi said...
ညီေးလေ၇....အစ်ကို့ကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ ပို့ပေးပါလား sithu33546@gmail.com
Nyinyi Tun said...
nwaynwayhlaing hlaing said...
ကြည့်မရလို့ဒီ မေးလေးထဲကိုပို့ပေးပါလားညီလေးဖြစ်ပါတယ်နော် hlaing5555@gmail.com
ဖတ်လို့မရလို့ myonanda01@gmail.com ထဲကိုထည့်ပေးပါ
ကြည့်မရဘူးခင်ဗျာ မေးထဲပို့ပေးပါနော် thank very much
yannaing htwe said...
Htein Lin said...
i cant see,pls sent my gmail, hteinlinhtike@gmail.com
ကြည့်လုိ့ကလည်းမရ ပို့ခိုင်းတဲ့လူကလည်းမနည်း ကျွန်တော်ကလည်းကြည့်ချင်
Simon Thorson said...
po pay pa simonthornson@gmail.com
Luchit Lay said...
ကြည့်လို့မရဘူး luchitlay109110@gmail.com ကိုပို့ပေးပါအုန်း
Phyo Thuya said...
်ကြည့်မရဘူး အကို ပို့ပေးပါအုန်း phyothuya44@gmail.com
tawtharlay koko said...
ပို့ ပေးပါနော်.............. ladysofcrazy007@gmail.com
s HONEY said...
ko linn said...
အကိုရေ ကျွန်တော့် Mail ထဲကိုလဲ ပို့ပေးပါအုံးဗျ ကြည့်ချင်လို့ပါဗျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် yawtharlay2013@gmail.com
Aung MIN PHYO said...
အကိုရေ ကျွန်တော့်ကိုလဲ Mail ထဲကို ပို့ပေးပါအုံးဗျ ကြည့်ချင်လို့ဗျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် aungminphyo1994@gmail.com
son ofhtayhtayye said...
sonofhtayhtayye1994@gmail.com par .video file ko send pay lite par brother yay.thz to all par.
naylin tun said...
Please send me too..Thanks..(naung2.19@gmail.com)
Ingulimala Clown said...
plz send for me ty... >>>> ingulimala.111@gmail.com
Thuya Naing said...